မွန်ပြည်နယ်တွင် တိုင်းရင်းသား စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေ?? - Yangon Media Group
မော်လမြိုင်၊ မတ် ၂ဝ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲကို မတ် ၁၉ ရက် ညနေ ၅ နာရီက အဆိုပါရုံးသစ်တည်ရှိရာ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့နယ် မင်းရွာကျေးရွာ မော်လမြိုင်-ကျိုက်မရောကားလမ်း ဘေးတွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနားတွင် မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအေးဇံ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ထောမွန်၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်တင်အိ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီး ဦးရွှေမြင့်၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးမျိုးမြင့်တို့က ရုံးသစ်ကို ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပြီး အမျိုးသားလွှတ် တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာ အောင်နှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ရေးရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်တို့က ရုံးသစ်ဆိုင်းဘုတ်ကို စက်ခလုတ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ အမျိုးသားလွှတ် တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာ အောင်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့က ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြားသည်။
”ကျွန်တော်တို့ တိုင်းသားလူ မျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနဟာ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအပြင် တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ စကား၊ စာပေ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံများ၊ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာများ မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ဒေသရေးအတွက် ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အစီအမံ တွေကို ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်က ပြောကြားသည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေး ရာဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသားစာ ပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသည် ပေ ၃ဝဝ၊ ပေ ၂ဝဝ မြေကွက်ပေါ်တွင် အလျားပေ ၈ဝ၊ အနံပေ ၆ဝ၊ အမြင့်ပေ ၂၄၊ နှစ် ထပ် RC အဆောက်အအုံကို ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံ ငွေကျပ် ၃၂၂၁ သိန်းဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆောက် အအုံဦးစီးဌာန၊ တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (၃)၊ အဆောက်အအုံအထူး အဖွဲ့ (၁၃) က တာဝန်ယူ၍ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြီး စီးကြောင်း သိရသည်။
တနင်္သာရီမြို့နယ် အတွင်း မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် ကားလမ်းများရေကျော်
မူဆယ်နယ်စပ်တွင် ဆန်ဝယ်လိုအား လျော့ကျမှုနှင့် ဆန်သစ်ပေါ်ချိန်တို့ကြောင့် ဆန်ကြမ်းဈေး ကျဆင်?
ဂျာမနီအသင်း အပြီးသတ်လူစာရင်းတွင် မန်စီးတီးကွင်းလယ်လူဆာနေး ချန်လှပ်ခံရ ၊ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပ?